यति बेला संविधानको किताब हेरेर अधिकार खोज्ने होइन, कोरोनाबाट बच्ने हो – प्रधानमन्त्री ओली – Online Bichar
यति बेला संविधानको किताब हेरेर अधिकार खोज्ने होइन, कोरोनाबाट बच्ने हो – प्रधानमन्त्री ओली
Online Bichar 19th April, 2020, Sunday 6:11 PM
७ बैशाख २०७७ आइतबार
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) को विश्वव्यापी सङ्क्रमणबाट बच्न नेपालमा सुरक्षाका उपाय अवलम्बनसहित रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका काम भइरहेका छन्। महामारी बिफल पार्न सरकारले हवाई र स्थलमार्गबाट आवागमन रोकेर गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन जारी गरेको छ भने परीक्षणको दायरालाई जिल्ला–जिल्लामा विस्तार गरेको छ।
यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक श्याम रिमाल र वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालसहित सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिले शनिबार साँझ गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण –
विश्वका कतिपय मुलुकको तुलनामा नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणमै भए पनि पछिल्लो समयमा आएका रिपोर्टले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको देखाएको छ, यसले कतै समयमा परीक्षण नगरेका कारण सङ्ख्या बढेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ। तपाई स्वयंको मूल्याङ्कनचाहिँ के छ?
विदेशबाट हवाइमार्ग आउने नागरिकलाई हामीले अझै अगाडि रोक्न सक्ने थियौं तर हामी विश्व व्यवस्थाभन्दा अलग्गै वा एक्लै अघि बढ्न सक्ने स्थिति पनि थिएन। कतिपय मुलुकले उडान नरोकेको समयमा नेपालमा मात्रै रोकिँदा किन रोकियो? भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्ने थियो। अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रवेशविन्दु र सीमानाका बन्द तथा आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएकाले नेपालमा यस महामारीले विशाल रूप लिनसकेको छैन।
कोभिड–१९ को उपचारका निम्ति हालसम्म औषधि वा खोपको त विकास भएको छैन। तर, पिपिइदेखि अन्य परीक्षणका सामग्रीको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन हुनसकेको छैन। अर्का्तिर खरिदको विषय पनि विवादमा छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
रोकथाम र उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद, उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सिसीएमसीजस्ता संयन्त्र छन्। यी निकायबीच उपयुक्त समन्वय, कार्य्विभाजन र कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ? जति बढी संयन्त्र उति बढी अन्योल हुने त होइन? यसमा जिम्मेवारी कसको?
वास्तवमा विचारहीन र आग्रहपूर्ण ढङ्गले जे मा पनि विरोध र दुष्प्रचार झुठ र अमर्या्दित प्रस्तुति गरिनु एकाध मान्छेको कर्कश धुन हो। यसरी आलोचना गर्नु त्यो उनीहरुको प्रवृत्ति हो। अमर्या्दित शैलीमा गरिने आरोपले आरोपकर्ताहरुको सांस्कृतिकस्तर देखाउँछ तर जनताको जीवनरक्षा गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीमा सरकार पछि पर्दैन। यसमा सबैको साथ र समर्थन छ।
यस्तो विषम स्थितिमा सरकार र पार्टी नेतृत्व एकताबद्ध र समन्वयात्मकरूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार एकातिर पार्टी अर्को्तिर जस्तो देखिएको छ। एकतापछि पार्टीमा पूर्वसमूह वा अन्य खेमामा नाममा विवाद कायमै देखिन्छ?